साइनो | Infomala
प्रवासी जीवन भएकाले घरमा एउटा भाषा हुन्छ र स्कुलमा अर्कै भाषा बोल्नुपर्छ। स्कुलको भाषामा नानीहरूको शैक्षिक भविष्य अडिएको हुन्छ। घरायसी भाषामा अपनत्व जोडिएको हुन्छ।
Comments Off on विदेशमा हुर्कने नानीबाबुहरूको घरायसी भाषा
कुरा बेल्जियमबाटै शुरू गरूँ । हजुर, म बेल्जियम मै बस्छु । नयाँ ब्लग शुरू गर्ने हुटहुटी जाग्यो । तर कस्तो खालको कुरा लेख्ने ? मेरो दिमागमा एकै चोटी बत्तिस थरिका बाझिएका विचार आए । यो बबुरो धरतीका हरेक कुरामा चाख राख्छ तर विशेषज्ञ केहीको भइएन । सोसल मिडियामा सेयर भएका ब्लगहरू यसो हेर्दा चिट्टचाट्ट ब्लग लेख्नेहरू देखिए । कसैले नक्कलझक्कल…
Comments Off on नाकको टुप्पोमा रिस र अनियन्त्रित हाँसो
Blogs / साइनो
बिदेशीसँगको बिहे : ह्याप्पी इन्डीङ् होला ?
केटाकेटीमा गोरे टुरिस्ट देख्दा हामी ‘ह्वाट इज योर नेम ?’ भन्दै पछ्याउने गर्थ्यौँ । अहिले तिनै गोरेहरको देशमा बस्दा र गोरिनी केटीसँग बिबाहित जीवन शुरू गर्दा पुराना सम्झना अनौठो लाग्छ । नेपालमा अझै पनि अन्तर्जातिय बिबाह पचीसकेको छैन, मैले त अन्तर्देशिय बिबाह गरेको छु । यस्तो बिहेको आफ्नै प्रकारको मज्जा छ, भिन्दै अनुभव छ । अन्तर्देशिय बिहेलाई नेपालमा अझै अचम्मको…
Comments Off on बिदेशीसँगको बिहे : ह्याप्पी इन्डीङ् होला ?